မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း Morris Inorder ဖြတ်သန်း - TutorialCup
ပင်မစာမျက်နှာ » နည်းပညာဆိုင်ရာအင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » သစ်ပင်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ » မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း
မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း
Tags: သစ်ပင် သစ်ပင်လှည့်လည်
သစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်တယ် စနစ်တကျဖြစ်သည် အသုံးပြု။ ကြားမှာဖက်ရှင် စုပုံထားဒါပေမယ့်အာကာသကိုစားတယ်။ ဒီတော့ဒီပြproblemနာမှာ linear space ကိုအသုံးမပြုပဲသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဖြတ်သွားလိမ့်မယ်။ ဒီအယူအဆကို Morris Inorder Traversal or Binary သစ်ပင်တွေမှာ Threading လို့ခေါ်တယ်။
မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု
မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း၏ရှုပ်ထွေးအားသုံးသပ်ခြင်း
အယူအဆမှာ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပင်၏နေရာ (သို့မဟုတ်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သောအရန်နေရာ) မပါဘဲသစ်ပင်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်သည် မည်သည့်ဆုံမှတ်၏လိပ်စာကိုမဆုံးရှုံးပါစေနှင့် ငါတို့မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာမသိမ်းဆည်းဘဲအစောပိုင်းကသွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုဟုခေါ်သည် မောရစ် Inorder ဖြတ်သန်း.
သို့သော်မည်သည့်နေရာမှခွင့်မပြုပါက node များ၏လိပ်စာများကိုမည်သို့သိုလှောင်နိုင်မည်နည်း။ အယူအဆမှာသစ်ပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုဤသို့သောနည်းလမ်းဖြင့်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။ root node မှ subtree တစ်ခုမှအချို့သောအထူး node များသို့လည်ပတ်ပြီးနောက်၎င်းသည်အခြား subtree ကိုလုပ်ဆောင်ရန် root node သို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ ဘယ်ဘက် subtree ကိုအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်ခဲ့ပြီး၊ ဘယ် subtree ၏အချို့ node တစ်ခုမှ pointer ထပ်ထပ်ထည့်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်မူလအမြစ်သို့ပြန်သွားခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သော subtree ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Morris Inorder Traversal တွင်အမြစ်တစ်ခု၏အတွင်းပိုင်း (၎င်း၏လက်ဝဲ subtree ၌) ကိုသူ့ဟာသူချိတ်ဆက်ပေးသည်။
ထောက်ပြသည့်ဤလုပ်ငန်းစဉ် (ချည်) inorder ရှေ့ကနေ root အထိခေါ်တယ် ချည်။ တနည်းကား၊ သစ်ပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်ုပ်တို့မနှောင့်ယှက်ချင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်များနှင့်အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်မည့် algorithm ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါမည် မုန်းတီးမှု သစ်ပင်ကြီး ၎င်း၏မူလဖွဲ့စည်းပုံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်.
လက်ရှိ node ကိုသစ်ပင်၏အမြစ်အဖြစ်စတင်ပါ။
ကျနော်တို့ဘယ်မှာရှိအခြေအနေသို့ရောက်ရှိမှီတိုင်အောင် iterating ထားပါ လက်ရှိ node ကို ဖြစ်လာ null ။
အလိုလျှင် လက်ဝဲဘက် လက်ရှိအမြစ်၏ subtree ဖြစ်ပါတယ် null :
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် root ကို print ထုတ်ပြီးညာဘက် subtree သို့ရွှေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် currentNode = currentNode-> right ။
အလိုလျှင် လက်ဝဲဘက် လက်ရှိအမြစ်၏ subtree ဖြစ်ပါတယ် မ null :
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် unthread / ချည် သူ့ဟာသူမှလက်ရှိ node ကို၏လက်ဝဲ subtree (inorder ယခင်) အတွက် rightmost node ကို
အပူချိန် = currentNode-> left;
စဉ် temp-> ညာဘက်ဖြစ်ပါတယ် မ null သို့မဟုတ်အပူသည် NOT currentNode
အပူချိန် = temp-> ညာဘက်
temp-> မှန်လျှင် null:
အဖြစ် threading ဖယ်ရှားလိုက်ပါ temp-> ညာဘက် = null
လက်ျာ subtree, currentNode = currentNode-> ညာဘက်ကို process
temp-> မှန်လျှင် NULL မဟုတ် -
အဖြစ်ဒီ node ကိုချည် temp-> ညာဘက် = currentNode
လက်ဝဲ subtree ကိုယခု process, currentNode = currentNode-> left
အို (N)၊ N သည်သစ်ပင်ရှိ node များ၏နံပါတ်ဖြစ်သည်။ node တိုင်းကို ၂ ကြိမ်အတိအကျလည်ပတ်ကြောင်းသေချာသည်။ ထိုသူအားလုံးသည် threading နှင့် unthreading လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ရှုပ်ထွေး linear နေဆဲဖြစ်သည်။
အို (၁)၊ ကျွန်တော်အချို့ variable တွေကိုကြေငြာဘို့စဉ်ဆက်မပြတ်အာကာသကိုသုံးပါအဖြစ်။ သို့သော်မည်သည့်အခြားအရန်နေရာမျှမရည်ရွယ်ပါ။ Morris Inorder Traversal ကထိုအရာကိုကတိပေးသည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား သစ်ပင်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများ Tags: အလယ်အလတ်, သစ်ပင်, သစ်ပင်လှည့်လည် post navigation
Left Leaves Leumcode Solutions ပေါင်းလဒ်
နှစ် ဦး ခွဲခြားစာရင်း Leetcode ဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစည်း